Mhlawumbe kakhulu kulo lonke elaseSoviet Union futhi manje republic kumbumbi walo zilindelwe bushelelezi-wazalela ukuzingela isikhali - Bullet Mayer, ngokuvamile ngethando egade ababiza "impeller". A. K. Mayer - a ovelele wezwe elaliyiSoviet Union unjiniyela, umklami, owadala futhi yawenza by wakhe wokusungula futhi ngo-1963. Inhlamvu Mayer kuyinto elula kakhulu imishini nokunye okuningi Cishe ukuletha inhlanhla ukuzingela.
Uhlobo lwesakhiwo, ukwakheka
Turbo-pointer uhlobo ukuzingela amachashazi kuthiwa esakazwa. Mayer ichashazi has simise cylindrical, elithatha isiteshi kwangaphakathi. Kuyo, kanye ngaphandle amachashazi kukhona imiphetho yomumo ezinikeza ukujikeleza zindiza, zazo zikhona ngokuvamile eziyisithupha. Ngokungafani nezinye imiklamo eminingi ngoyisiwula kusinda kunakho inhloko yabangamashumi ichashazi, ungabi ngumsila.
Mayer wenza ichashazi ngomthofu. I ububanzi emaphethelweni yangaphandle inkudlwana osezingeni izikhali, yingenxa bachotshozwe lapho wadubula, ukuze ukuqondanisa kangcono inhlamvu e umgqomo elinikeziwe. Sakaza amachashazi ezinjalo umsebenzi ekhaya ngokwanele enzima, kodwa iningi abazingeli wendawo ukukwenza. Umklamo self asakazwe livamile izinguquko, ngakhoke Mayer ichashazi 12 gauge, isibonelo, ngezinye izikhathi kakhulu sihluke efanayo, kodwa kusuka nomkhiqizi ezahlukene, ngisho ngesisindo.
Lena design ngempumelelo kakhulu. Ngenkathi indiza Mayer ichashazi 12 osezingeni (nezinye Izikali futhi) liziphatha ngendlela ehlukile namanje. Kwavela ukuthi emaphethelweni ezitshekile ku ukujikeleza akusebenzi, kodwa ukukusiza ukuba silinganisele. Ngokugxilisa ebhuthini Friend, ngakho ukunemba izinhlamvu idlula abanye, cishe wonke amamodeli ngoba izibhamu. Ukuhlakazwa is etholwe okufanayo, kwenzekani lapho ixoshe kusuka izibhamu, uma usebenzisa ichashazi Mayer libuyekeza cishe zonke abazingeli uqinisekise lesi.
Yiqiniso, inhlamvu Kufanele kukhethwe ngokucophelela kakhulu ukuthi kwakungekho isici kulo, futhi isisindo kwaba zonke efanayo. Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka amamitha ayikhulu nokunemba ngaphezulu kakhulu, okuyinto akunjalo kweminye imihlobo. Ngokuvamile ezinye amachashazi hit ilitshe ngokunembile, uma kuyintando at ibanga ngamamitha angaphezu kwayisithupha. isisindo esikhulu deformability enhle umthelela has 12 osezingeni ichashazi Mayer. ichashazi Izinsiza kusebenza kufanele kube olunembile ke kuvikelwe ithinta ikhono utholakala cishe kuwo wonke amabanga. Lesi sithombe enemininingwane uzobe kuchaziwe ngezansi.
Yiqiniso, it has nemiphumela ethile engathandeki kanye Mayer ichashazi 12 osezingeni. Izibuyekezo bethi ibonakale iningi, uma inhlamvu senziwa wezandla kanye eliphansi. Ngokwesibonelo, wasebenzisa umthofu esithambile futhi, lapho kungekho izithasiselo ukungadluliseli amandla. Kulokhu, udinga ukwazi ngokuthe ngqó ukuthi lokukhokhisa Mayer esingu. Amplified isiyalezo neziqhumane kuzokwenza inhlamvu gingqika zindiza, ngoba echotshozwa-sindisa ngesikhathi shot, ngisho isiteshi yangaphakathi kungenziwa ivaliwe.
Ngokwemvelo, lokhu kusho sikhubazekile ichashazi uphawu cishe akwenzeki. Lapha lingasho kuphela ukusiza ichashazi Sabot. Futhi powder esingamakhilogremu noma kunjalo ngeke lidlule. Elinye icala - uma impahla ichashazi igxilile kakhulu. Lokhu zimbi kakhulu, ngoba kukhona ingozi yokonakalisa sesihlahla. kusimo Okuningi - ngisho noma waphonsa kahle futhi njalo ukushaja kahle ichashazi Mayer, kuyothiwa baphambukile flight uma eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa. Notshani amagatsha emithi, iyiphi isithiyo yemvelo kungavimbela indiza yayo olunembile.
Ungaluthola kuphi futhi lokho
Cishe noma yimuphi amachashazi senzelwe izibhamu okuzingela ezidingekayo for the isizinda isilwane esikhulu. Lena inyamazane ezahlukene, ibhere, izingulube zasendle, amaphiva nezinye izilwane ezizingela emazweni Russian. ichashazi Shooting Mayer ka bushelelezi-wazalela ukuzingela sokuzingela isetshenziswa ngesikhathi umdlalo esikhulu kusukela ezenzeka ezweni lethu.
Thenga izinhlamvu Kulula ngempela, cishe ziyothambekela kakhudlwana ukuba zitshele ngakhoke njalo has okuthengiswako zonke izitolo umdlalo. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi inhlamvu enjalo okuthengiswa ngemali ephansi ngokwanele, ngokungafani nezinye amachashazi.
Ubude kufanele kube amamilimitha angu amabili nambili (plus noma lokususa 0.3) - lokhu kungenxa 12 osezingeni. Inhlamvu Mayer 16 gauge ncamashi nobude obufanayo, kodwa isisindo lihlukile. osezingeni nambili ukala 34 amagremu mayelana 29 amagremu nesithupha kanye.
Ijubane incike igiya igobolondo, ngokuvamile, ifinyelela 420 metres ngomzuzwana. Futhi kusukela imishini incike amandla nomlomo, ngokuvamile kuba amakhilojuli mayelana emithathu nengxenye.
Isisetshenziswa Mayer ichashazi kubaluleke kakhulu ukuzingela ngempumelelo. Inhlamvu sokudubula ukuhluka ngokuphawulekayo lesi sigameko, isibonelo, ingxenyenamba, ngakho ngezinye igobolondo igiya kudinga nakukhathazeka ekhethekile shot zamanga ayibuyi, kodwa waphumelela. Nokho, abazingeli abaningi babesola yena ngemva miss for lomgwaqo igobolondo ezimbi.
Izindlela ukushaja igobolondo ichashazi akumele i- lutho. Into ebaluleke kakhulu - awukwazi ukusebenzisa imishini yomunye, ogama izinga alwaziwa. A cartridges self-ezenziwe kudingeka ngempela ukuzama, kusukela isibhamu okufanayo lapho ukuya ukuzingela.
Mayer ukuhlomisa ichashazi 12 osezingeni phezu izincomo kumdlali. Udinga emikhonweni iphepha capsule, elithululelwa amabili amagremu powder. I capsule wasebenzisa "Zhevelo" futhi neziqhumane kangcono, "Ukhozi". Amazinga akufanele kube ngezansi -4 degrees Celsius. Uma frost Izinga okukhulu kuka-20, inani powder omunye kwabayishumi zingandiswa. 12 osezingeni ichashazi isisindo 33-34 amagremu, futhi kubalulekile ukuba athole indlela. Eceleni powder ukuletha lezi gaskets leyakhiwe ngemabhokisi ukushuba ingqikithi ezintathu amamilimitha angu-ke isidingo wazizwa wad e polkalibra isiqu ukujiya, okuyinto iyasikwa ibe yizicucwana amane at kokuwa.
On wawungathi kudingeka uthele sawdust esihle, okuyinto ubeke wad amakhadibhodi kancane ezingaphezu kwesigamu noma ingaba isentimitha nje obukhulu. Kube sekulandela trohmillimetrovaya gasket leyakhiwe ngemabhokisi ububanzi nse ukuthi yomzimba ichashazi, singabali izimbambo. Lokhu yokusungula kufanele ngokunembile igxile emkhonweni tube. Khona-ke udinga ukulahla inhlamvu njengoba ngokucophelela ngangokunokwenzeka, ngaphandle ukufuduka thick amakhadibhodi wad. Umkhono we manje crimped. A ungqimba of sawdust kufanele ashiye lokhu cishe ezinhlanu amamilimitha angu.
Indlela yokwenza chuck ezinhle
Yikuphi igobolondo ubhekwa kahle lomgwaqo? Ukuze bushelelezi-wazalela isikhali ingenye ukuthi lapho kokudubula powder amagesi ukudala ingcindezi esingeqile 663 kg isentimitha sikwele. Uma lo ububanzi we ukuhlakazwa at ibanga kwamamitha amahlanu lingaphansi kuka amasentimitha ayishumi. Uma iphuzu kuhloswe futhi hit okufanayo lapho edubula amamitha amahlanu. Indlela yokufeza le mfanelo?
Okokuqala ukulungiselela zonke izakhi ze-olunembile Ammo izimpahla. Qinisekisa ukuthi amaphilisi babe ezifanayo umnyaka woyekelo, futhi kungcono - eningi. Ubude emikhonweni kanye negumbi obuphelele kumelwe kuvumelane, kanye diameters we - emikhonweni kwangaphakathi kanye wazalela. Hlola ukuthi i-powder kwaba yinhlangano eyodwa, futhi amakhadibhodi wazizwa wads akazange zihluke igobolondo ukuba igobolondo. Futhi-ke, ichashazi isisindo, futhi, kudingeka sithathe, ukuba nabo benze okufanayo.
Izindlela imishini kanye contraindications
Umsizi kumele ube nesisindo ngokunembile kakhulu nge nephutha engaphansi kuka 0.01 amagremu, futhi cindezela icala ukuphoqelela amakhilogremu kubonakale eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi. Powder kufanele zithunyelwe ku amakhadibhodi noma plastic gasket uphawu ke osalenny wazizwa wad, cishe kwaze kwaba sekupheleni ukusika crosswise ngemva okuzothathwa wathumela, futhi wenza ichashazi kweqa emkhonweni.
Wad ngabe yikuphi hhayi ibekwe phezu inhlamvu, futhi ungalokothi akusho ugcwalise - noma tallow, noma upharafini. Izibhamu ukuvaleka ngezinye izikhathi mikhulu umgqomo - ngaphezu milimitha ku osezingeni nambili. Ngakho-ke, sub-osezingeni amachashazi esetshenziswa. Ngo izibhamu nanye, isibonelo, avame ukusetshenziswa nesithupha ichashazi osezingeni.
Temperature zeroing kufanele luhambisane cishe kulokho okufanelekile kulindeleke ngosuku ukuzingela. Uma ukusabalala amachashazi likhulu kakhulu, udinga ukwehlisa icala powder. Kungokufanayo kufanele kwenziwe uma amachashazi ngendiza ngenhla iphuzu kuhloswe for amasentimitha angaphezu kuka-nanhlanu. Lapho ichashazi ukuwa ngezansi leli phuzu, kodwa iqembu enkulu ngokwanele, mass powder kungase kukhule. Uma lokhu ukuxazulula le nkinga, uhlobo inhlamvu esikhundleni nguye kulula, ngisho ukushintsha indlela imishini.
Self-ukulayisha isibhamu nge ijabulise magazini sokuzingela adinga ukunakekelwa okukhethekile. Cartridges kukhona ezishaywayo nomunye, kusho ukuthi le nhlamvu kumele lalihlehliswa ku emkhonweni kuya phezulu kwaba ephansi ngo-emihlanu amamilimitha angu Dultsev seamed hhayi unamathele yakhe umnikazi langaphambilini, okungaholela engozini. Okwamanje ngokudubula the capsule ichashazi kwabathinta eziseduze, futhi kukhona ukuqhuma noma igobolondo, noma ephelele esitolo igebe.
Kanjani ukuze siyifeze cartridges
Kumele akwazi ukuhlomisa hhayi kuphela kodwa kukhishelwa cartridges uma, isibonelo, ofakwe. Akufanele ziyalahlwa. Umsizi ezingezinhle noma ubudala ashisiwe, kodwa shot, wads, emikhonweni lilimale ingasetshenziswa namanje. Lapho chuck cleaner kudingeka sikhumbule umthetho main.
1. igobolondo ungacimi etafuleni noma ezinye surface flat. Udinga ukwesekwa nge kunesikhala ukuze primer kwaba emoyeni.
2. Musa ugoba noma ukuhlomisa, noma phezu igobolondo dischargeable. Khipha njalo igobolondo ebusweni ngangokunokwenzeka.
Ummese noma sikelo kuyadingeka ukuze uqondise onqenqemeni seamed we emikhonweni, hook shot wad, idonsele futhi uthele ingxenyenamba. Khona-ke sokuval ibhodlela noma enye idivayisi ukususa powder wads. Thela neziqhumane futhi lushiswa zonke izinyathelo. I capsule we emikhonweni ku zikhiqiza emgqonyeni (pre copiously nivame ngoba nokugqwala livela kusuka esikalini). Okunzima kakhulu ukukhipha ichashazi, njengoba it is kakhulu esishwabene. Uma kudingeka, emikhonweni esinjalo usike ke inhlamvu bunjalo.
Namuhla, kunezindawo eziningi emhlabeni zezintaka amachashazi ukuze abazingeli izikhali, kokuba isakhiwo ehluke ngokuphelele, futhi bahlala batfutfukisa entsha, asebenza. NoBujamo, isisindo, isayizi, izinto lapho inhlamvu senziwa, njalo zincike lapho uya khona. Ngokwesibonelo, Mayer ichashazi senzelwe abazingeli elikhulu umdlalo ukuzingela nge izibhamu yeshumi nambili noma osezingeni nesithupha. Uma ulandela izincomo amachashazi nganoma umklami wakhe ngubo, ongayifinyelela imiphumela ezinkulu. Uma usebenzisa izindlela ezivamile efanelekayo ezinye amachashazi, impumelelo akakwazi ukukufinyelela nhlobo. Abazingeli ngokuvamile azame ukushintsha design of the inhlamvu Mayer, ukushintsha indlela imishini cartridges. Ngokuvamile, ukusebenza ngcono, nakuba Yiqiniso, hhayi ngaphandle okuhlukile.
Ngezikhathi ezithile ucwaningo nemiphumela kungalindelekile ezinhle. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi i-kwepulani ukuze uzizamele imishini ukuzingela izimpahla badinga eningi isipiliyoni ekubhekaneni izinhlamvu kanye nezikhali jikelele. Kodwa ngisho ne nesipiliyoni lokunakekela kufanele kube umkhawulo. Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga ezihlukahlukene zezinhlamvu, kukhona njalo ukukhetha okuhle eliphezulu ezitolo ukuzingela. Nokho, isikhali kuyinto ngabanye kanjalo, ngokuvamile amachashazi kuphela efanelekayo izici eziyisisekelo. Kuphela ngakho kulandwe amaphisi amaningi enziwe zabo noma kushintshwe izilungiselelo oyifunayo uthenge ngokuhambisana nezidingo isikhali ethile.
Ezindaweni eziqhele Ekude naseSiberia abazingeli wathela amachashazi ngokuvamile yedwa ngoba ethenga kude. Abanye le njongo bafunda amakhono ukusebenza imidwebo besebenzisa stanochki ezihlukahlukene, kuhlanganise turning, ngoba inhlamvu Mayer, isibonelo, akunjalo elula nje waliphonsa. izinhlamvu Uthuthwa noma izikhwama waterproof ekhethekile noma amabhokisi. Uma ukuzingela sifushane, kulula ukuyisebenzisa kule bandolier njongo. Kodwa ukuthuthwa obanzi izinhlamvu ngempela ephelezelwa nobunzima ezithile.
Nezitulo izingane in the ifremu isithuthuthu isiqu: kanjani ukuba ukhethe bese ufake
Ekuhlaziyeni emoyeni sokuzingela Hatsan waphambili Edge
Kayak "Pike": ukubuyekezwa, ukubuyekezwa. Kayak "Pike-3"
Air ngezibhamu "Ataman": incazelo,
Anyanisi recursive: umklamo, izinzuzo
Bazalwane Ingxabano ( «Ukungqubuzana kwezinhloso Abafowethu"): anime abalingiswa, Umlandvomphilo zabo, izici
Recipe ravioli okuzenzela - sesiko lasekhaya
Isicelo futhi umphumela "Cefotaxime." "Cefotaxime": i Analogue zomuthi
Indlu yetivakashi "Izintandokazi Beach": Incazelo kanye nokubuyekeza
Simila wesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa: Kuqakatheke aphathe
Okumibalabala Lip - Luyini? Izibuyekezo mayelana eseyintsha emangalisayo
Amagatsha eyinhloko Russian Imboni Khanyisa
Yini ongayinika intombazane iminyaka engu-16: imibono ethakazelisayo nezincomo